Orinasa fonosana sakafo, mpamatsy - mpanamboatra fonosana sakafo any Shina
Custom pirinty Krismasy haingon-trano boaty Tin ho an'ny fanomezana & fampiroboroboana
Famaritana anarana Product Custom pirinty haingon-trano Krismasy Tin Box ho an'ny fanomezana & fampiroboroboana fitaovana kilasy tinplate hateviny 0.23 ~ 0.35mm Modely efa nisy ny fotoana fandefasana 25 andro Certificants ISO9001, SEDEX, SGS, Mcdonald, BV, Disney MOQ 1500 pcs Fampiasana fanomezana sy fampiroboroboana Alohan'ny handefasanao fangatahana, aza misalasala mamaky fanamarihana manaraka: 1. Maimaimpoana ny santionany misy anao. 2. Ny santionany amin'ny kanto noforoninao dia mila charg ...
Anaran'ny vokatra 5L Menaka oliva tantaram-boanom-boaloboka Volomboasary menaka oliva olitra kapila plastika teleskopika spout, fantsona plastika Capacity 5L habe 168 * 105 * 300mm (H) hatevin'ny 0.25mm lanja 453g Sakafo ara-tsakafo tinplate endrika endriny fanontana CMYK, fanontana loko namboarina MOQ 5000pcs Fandoavam-bola fandoavam-bola T / T 30% mialoha. Ary ny fifandanjana alohan'ny fandefasana Loading Port Shenzhen na Guangzhou Fotoana fandefasana ...
Tine Popcorn tsy misy fangarony sy kitapom-bozaka ho an'ny ambongadiny ho an'ny akany sy ny fandefasana Byland Afaka mamokatra Tins Popcorn kalitao tsara indrindra ao amin'ny indostria ho an'ny sakafo snack sy harona fanomezana. Tins no vahaolana fanomezana fanomezana mailaka tsara indrindra! Nandritra ny am-polony taona maro dia nankafy fanomezana be izy ireo nandritra ny fialantsasatra. Manana tahiry amin'ny endriny endrika tsara tarehy- Krismasy sy amin'ny fotoana rehetra ary koa kapoaka miloko matevina izahay. Ny Popcorn Tins misy tapitra lehibe kokoa sy mahitsy dia tsara ho an'ny poti-ovy, p ...
Tavoahangy vita amin'ny vy vita amin'ny vy 3-fonosana fisotroana zava-pisotro sy zava-pisotro
3-pieceMetal tinplate can_ Beverage can Type necked-in can Thickness for can body 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.23 / 0.24 / 0.25mm sokajy voalohany Tinplate Diameter Φ 52 / Φ 65 / Φ 70 / Φ 80 mm Volume 180ml -1000ml Tinplate Can Fampiasana kafe, zava-pisotro, sakafo, mofomamy, vatomamy sns Fanontana 4 loko (CMYK) fanontana any ivelany, PANTONE COLOR ary lacquered anatiny no ekena. Fahafahana mamokatra: 200000 pcs isan'andro ho an'ny aerosol can; 30000 ravina isan'andro hanaovana pirinty MOQ: depen ...
100ml-250ml-500ml-1L-3L menaka fikotranana menaka camellia misy kaopy misy menaka oliva metaly tsy misy poizina
Taratasy avy amin'ny Firenena Mikambana famehezana tsara, fanoherana ny harafesina famehezana tsara, patina garde sakafo.
Fitsapana 100% amin'ny milina fitsapana tombo-kase mandeha ho azy.
CMYK fanontana an-tsokosoko na tsy fanontana.
Fampiasana amin'ny: menaka oliva azo hanina, menaka voanio, menaka voana tanamasoandro.
250ml-500ml-1L-5L Tinplate azo amonoana menaka oliva
Famaritana famaritana 250ml-500ml-1L-5L Tinplate afaka famonosana menaka oliva Sakafo ara-tsakafo sy SGS tinplate nekena (0.21-0.28mm) refy Toy ny hita eto ambany lisitra Ampiasaina menaka oliva, menaka fandrahoan-tsakafo, menaka tanamasoandro, sns. Antsipiriany hafa Ny tantana plastika sy ny spout, ny tins vita amin'ny tondra-drano dia azo ampiasaina amin'ny fonosana menaka azo hanina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny menaka oliva no menaka azo hanina faran'izay avo lenta amin'ny natiora. Fambolena maro no mampiasa fonosana amina tinplate. Manana ny habe sy ny ...